MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward နိုင်ငံတကာသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဖုန်းပိုမိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီီ။ - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
နိုင်ငံတကာသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဖုန်းပိုမိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီီ။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုများ (IDD) အတွက်
ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင် ့
ဝန်ဆောင်မှုပေးတော့မှာဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးဈေ းနှုန်းသက်သာသောဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျက် နိုင်ငံတကာသို့တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခကို ဈေးလျော့ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထားအသစ်ကို
နိုင်ငံ၏တည်နေရာဇုံအပေါ်မူတည်၍ ၂၀၀ ကျပ်မှ ၈၀၀ ကျပ်အထိ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှု အချက် ၅ ချက်ဖြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အာဆီယံအသင်းဝင် နိုင်ငံများနှင့် အခြား ၈နိုင်ငံ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၊ ဘရူနိုင်း ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊ တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင် ၊ အိန္ဒိယ ၊
အင်ဒိုနီးရှား ၊ ဂျပန် ၊ လာအို ၊ မကာအို ၊ မလေးရှား ၊ ဖိလစ်ပို်င် ၊ စင်္ကာပူ ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ယိုးဒယား နှင့် ဗီယက်နမ်) သို့
တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် အဝေးကွာဆုံးနေရာများရှိ နိုင်ငံများသို့ ယခုကဲ့သို့ ချိုသာသောနှုန်းထားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေး
ASEAN & 8
Other Asia & Oceania
Tariff (Ks/min) 200 250 400 600 800
Countries Covered 1. Bangladesh
17. Vietnam 1. USA
2. Canada 1. Afghanistan
20. Norfolk islands 21. North Korea
37. Wallis and Futuna 1. Albania
23. Italy 24. Latvia
48. Vatican City Other countries not specified
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ နိုင်ငံခြားလိုင်းဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုသည့် နိုင်ငံရပ်ခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဟု သတ်မှတ်သည်။
အော်ပရေတာပေါ်မမူတည်ဘဲ နိုင်ငံအလိုက်သာ ကျသင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
IDD ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားနိုင်ငံရှိ လိုင်းဖုန်းနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ Voice Call ခေါ်ဆိုုခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အခြားနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆိုမှုများ အတွက် ခေါ်ဆိုသည့်နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ အော်ပရေတာမှ တူညီသော နှုန်းထားများဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
MPT GSM/WCDMA နှင့် CDMA အသုံးပြုသူများအားလုံးအကျုံးဝင်သည်။
MPT SIM ကတ်များအားလုံးတွင် နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် မည်သည့် လေ ျှာက်ထားခြင်းမှ ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အလိုအလေ ျှာက် ခေါ်ဆိုနိုင်မည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စျေးနှုန်းတို့ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ MPT သည် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အထက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ အသစ်ပြုပြင်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ (Website ၊ စျေးဆိုင်များ၊ စသည်) တို့မှတဆင့် ဆက်သွယ်ဖော်ပြမည် ဖြစ်သည်